हेलोवीन Spins ड्रप नियम र दशा |
हेलोवीन छोड सर्तहरू र SPINS
यो पदोन्नति बीच सक्रिय हुनेछ 00:01 31सेन्ट अक्टोबर 2017 र 23:59 2एन नोभेम्बर 2017.
100 को पुरस्कार 100 मा ब्वाँसो रन मुक्त spins 12pm 31 अक्टोबर मा विजेता खाता राखिनेछ र giveaway को सुरु चिनो हुनेछ.
एक बोनस 100 Spins को winnings खेलाडीहरू खाता थपिनेछ.
प्रविष्टि लागि योग्य प्लेयर आफ्नो खातामा लग इन हुनुपर्छ वा 1st पछि अक्टोबर 2016
यी Spins मा ब्वाँसो रन मात्र लायक हुनेछ 40p प्रत्येक र मान्य.
को spins खेलाडीहरू सुरु गर्नुपर्छ ब्वाँसो रन सक्रिय गर्न
बोनस रकम 30x एक wagering आवश्यकता बोनस अघि भेट हुनुपर्छ बोक्न र कुनै पनि winnings capped नगद रूपान्तरित छन् र यो र कुनै पनि थप winnings withdrawable बन्न.
निम्न पर्स को wagering आवश्यकता तिर र यो क्रम मा हुनेछ: रियल नगद, बोनस र त्यसपछि मुक्त स्पिन बोनस.
एक पटक आफ्नो बोनस spins लागि मान्य रहन जम्मा7दिन. तपाईं यस अवधिमा आवश्यकताहरु पूरा हुँदैन, यो पदोन्नति देखि बाँकी spins आफ्नो खाता हटाइने.